လကျပွငျကုနျးသူတှအေတှကျ ကိုယျနဟေနျထားမှနျဖို့ နညျးလမျး (7) မြိုး
HomeKnowledgeလကျပွငျကုနျးသူတှအေတှကျ ကိုယျနဟေနျထားမှနျဖို့ နညျးလမျး (7) မြိုး
အခြိနျတျောတျောကွာ ပုခုံးကို မတျမတျမထားတဲ့ အခါ လကျပွငျကုနျး သှားပါတယျ။ လကျပွငျကုနျးခွငျးကို မပွုပွငျရငျ ကြီးပေါငျးရောဂါနဲ့ ကြောရိုးအကျခွငျး၊ ကြိုးခွငျး စတဲ့ အခွအေနဆေိုးတှအေထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့နောကျကြောမှာ အဖုအခုံးကွီး ဖွဈလာပွီလို့ သတိထားမိရငျ လကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ ပွုပွငျလို့ရပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လှယျလှယျကူကူတှေ ပါပဲ။
7. ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျ မြားခွငျးကလညျး လကျပွငျကုနျးခွငျးရဲ့ အကွောငျးအရငျးတှေ ထဲက တဈခကျြ ပါဝငျပါတယျ။ ဝတဲ့အခါ လညျကုတျမှာ အဆီတှေ သှားစုနေ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စားသောကျမှု ပုံစံကို ပွငျဆငျသငျ့ ပါတယျ။ အရကျ၊ ဘီယာတှေ သောကျမယျ့အစား ရသေနျ့သနျ့ပဲ သောကျသငျ့ပါတယျ။
အိပျတဲ့အခါ ကြောရိုးက မတျတပျရပျနတေဲ့ အနအေထား အတိုငျး ဖွောငျ့ဖွောငျ့ တနျးတနျးပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
- ပကျလကျလှနျပွီး အိပျသူ ဆိုရငျ လညျပငျးအောကျမှာလညျး ခေါငျးအုံးထား အိပျပါ။
- ဘေးစောငျးအိပျသူ ဆိုရငျ လညျပငျးနဲ့ ပုခုံးကွားမှာ ခေါငျးအုံးထားအိပျပီး ဒူးနှဈဖကျထဲ ကိုလညျး ခေါငျးအုံးထားအိပျပါ။
5. ကြောကွှကျသား လကေ့ငျြ့ခနျး
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျတဲ့အခါ ကြောကွှကျသားတှေ သနျမာလာပွီး ခန်ဓါကိုယျက အဆီတှလေညျး လောငျကြှမျးသှားမှာပါ။ ကိုယျနဟေနျထားလညျး မှနျကနျလာမှာပါ။
- လကျနှဈဖကျကို ခေါငျးအနောကျမှာ ယှကျထားပွီး ခေါငျးညိမျ့လိုကျ ခေါငျးမော့လိုကျ ဆယျကွိမျပွုလုပျပါ။
ခေါငျးကို ညာဖကျစောငျးလိုကျ၊ ဘယျဘကျစောငျးလိုကျနဲ့ တဈဖကျကို3ကွိမျစီ ပွုလုပျပါ။
3. လညျပငျးအောကျက ကွှကျသားတှကေို ဖွလြှေော့ပါ။
ခေါငျးအောကျဘကျက အမှတျနှဈခုမှာ တငျးနဈဘောလုံးကို ထားပါ။ တငျးနဈဘောလုံး မရှိရငျ ခေါငျးအောကျဘကျက အမှတျနှဈခုကို တဈမိနဈခှဲ ကွာအောငျ နှိပျနယျပေးပါ။
2. လညျပငျးကွှကျသားတှကေို နှိပျနယျပေးပါ။
လကျပွငျကုနျးတဲ့အခါ လညျပငျးအောကျက ကွှကျသားတှကေ တငျးနမှောပါပဲ။ လညျပငျးကွှကျသားတငျးနတောတှေ ပွလြေော့ဖို့ ဆိုရငျ
- ပုဝါ3ထညျ ဒါမှမဟုတျ တဘကျ3ထညျကို ပေါငျးပွီး လိမျလိုကျပါ။
- လိမျထားတဲ့ ပုဝါ အစှနျးနှဈဖကျကို ကိုငျပွီး လညျပငျးနောကျမှာ ထားပါ။
- လညျပငျးကွှကျသားတှေ တငျးနတော လြှော့သှားအောငျ ပုဝါစနဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး အပျေါအောကျ ပှတျတိုကျပါ။
ကွာခြိနျ - 5-7 မိနဈ
1. အမွဲတမျး ပုခုံးကို မတျမတျထားပါ။
လကျပွငျကုနျးနတေဲ့ အခါ အလေးခြိနျ10 ပေါငျလောကျက လညျပငျးပျေါမှာ ဖိအားရောကျနေ ပါတယျ။ လမျးလြှောကျတဲ့ အခါ မွကွေီးနဲ့မေးစကေို့ အပွိုငျထားပွီး ခါးမတျမတျလြှောကျပါ။
ထိုငျတဲ့ အနအေထား မှနျဖို့ဆိုရငျ စောငျအသေးလေး တထညျကို လိပျပွီး မွီးညှောငျ့ရိုး အောကျမှာ ခုပွီး ထိုငျပါ။
လက်ပြင်ကုန်းသူတွေအတွက် ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်ဖို့ နည်းလမ်း (7) မျိုး
အချိန်တော်တော်ကြာ ပုခုံးကို မတ်မတ်မထားတဲ့ အခါ လက်ပြင်ကုန်း သွားပါတယ်။ လက်ပြင်ကုန်းခြင်းကို မပြုပြင်ရင် ကျီးပေါင်းရောဂါနဲ့ ကျောရိုးအက်ခြင်း၊ ကျိုးခြင်း စတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နောက်ကျောမှာ အဖုအခုံးကြီး ဖြစ်လာပြီလို့ သတိထားမိရင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွယ်လွယ်ကူကူတွေ ပါပဲ။
7. ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် များခြင်းကလည်း လက်ပြင်ကုန်းခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ထဲက တစ်ချက် ပါဝင်ပါတယ်။ ဝတဲ့အခါ လည်ကုတ်မှာ အဆီတွေ သွားစုနေ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စားသောက်မှု ပုံစံကို ပြင်ဆင်သင့် ပါတယ်။ အရက်၊ ဘီယာတွေ သောက်မယ့်အစား ရေသန့်သန့်ပဲ သောက်သင့်ပါတယ်။
အိပ်တဲ့အခါ ကျောရိုးက မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ အနေအထား အတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့် တန်းတန်းပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
- ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်သူ ဆိုရင် လည်ပင်းအောက်မှာလည်း ခေါင်းအုံးထား အိပ်ပါ။
- ဘေးစောင်းအိပ်သူ ဆိုရင် လည်ပင်းနဲ့ ပုခုံးကြားမှာ ခေါင်းအုံးထားအိပ်ပီး ဒူးနှစ်ဖက်ထဲ ကိုလည်း ခေါင်းအုံးထားအိပ်ပါ။
5. ကျောကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်တဲ့အခါ ကျောကြွက်သားတွေ သန်မာလာပြီး ခန္ဓါကိုယ်က အဆီတွေလည်း လောင်ကျွမ်းသွားမှာပါ။ ကိုယ်နေဟန်ထားလည်း မှန်ကန်လာမှာပါ။
- လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းအနောက်မှာ ယှက်ထားပြီး ခေါင်းညိမ့်လိုက် ခေါင်းမော့လိုက် ဆယ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
ခေါင်းကို ညာဖက်စောင်းလိုက်၊ ဘယ်ဘက်စောင်းလိုက်နဲ့ တစ်ဖက်ကို3ကြိမ်စီ ပြုလုပ်ပါ။
3. လည်ပင်းအောက်က ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ပါ။
ခေါင်းအောက်ဘက်က အမှတ်နှစ်ခုမှာ တင်းနစ်ဘောလုံးကို ထားပါ။ တင်းနစ်ဘောလုံး မရှိရင် ခေါင်းအောက်ဘက်က အမှတ်နှစ်ခုကို တစ်မိနစ်ခွဲ ကြာအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။
2. လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။
လက်ပြင်ကုန်းတဲ့အခါ လည်ပင်းအောက်က ကြွက်သားတွေက တင်းနေမှာပါပဲ။ လည်ပင်းကြွက်သားတင်းနေတာတွေ ပြေလျော့ဖို့ ဆိုရင်
- ပုဝါ3ထည် ဒါမှမဟုတ် တဘက်3ထည်ကို ပေါင်းပြီး လိမ်လိုက်ပါ။
- လိမ်ထားတဲ့ ပုဝါ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ပြီး လည်ပင်းနောက်မှာ ထားပါ။
- လည်ပင်းကြွက်သားတွေ တင်းနေတာ လျှော့သွားအောင် ပုဝါစနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း အပေါ်အောက် ပွတ်တိုက်ပါ။
ကြာချိန် - 5-7 မိနစ်
1. အမြဲတမ်း ပုခုံးကို မတ်မတ်ထားပါ။
လက်ပြင်ကုန်းနေတဲ့ အခါ အလေးချိန်10 ပေါင်လောက်က လည်ပင်းပေါ်မှာ ဖိအားရောက်နေ ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါ မြေကြီးနဲ့မေးစေ့ကို အပြိုင်ထားပြီး ခါးမတ်မတ်လျှောက်ပါ။
ထိုင်တဲ့ အနေအထား မှန်ဖို့ဆိုရင် စောင်အသေးလေး တထည်ကို လိပ်ပြီး မြီးညှောင့်ရိုး အောက်မှာ ခုပြီး ထိုင်ပါ။